वेस्ट डिकम्पोजरको प्रयोग गरौ । मलमा खर्च गर्ने हजारौ रुपैँया बचाऔ । – कृषक र प्रविधि
मल बिना बाली उत्पादन सम्भव हुदैँन । गाँउघरमा पनि आजकल गोबरमल, सोत्तर व्यवस्थापन गर्ने श्रमको कमिका कारण किसानहरु मल खरिद गर्न बाध्य भएका छन् । मल हुनेहरुले पनि उपयुक्त तरिकाले मलको व्यवस्थापन नगर्नाले जति मल राख्दा पनि उत्पादन बृद्धि हुन सकिरहेको छैन् । घरमा नै भएको गोबर, पातपतिंगर, सोत्तर आदिलाई कुहाएर गुणस्तरीय मल बनाउन सकिने प्रविधि भारतमा बिकास भएको छ । भारतको गाजियाबाद स्थित राष्ट्रिय जैविक खेतीको केन्द्रले वेस्ट डिकम्पोजर नामक एउटा मिश्रण तयार पारेको छ जसको प्रयोगले माटोलाई स्वास्थ्य बनाउने,फोहोर कुहाउने तथा बालीमा लाग्ने विभिन्न किसिमका रोगहरु नियन्त्रण गर्न मद्दत पु¥याउँछ । भा.रु. २० रुपैँयामा भारतमा किन्न सकिने उक्त मिश्रण एकपटक किनेर ल्याए सधै भरिलाई प्रयोग गर्न सकिन्छ । यो मिश्रणमा करौडोको संख्यामा माटोलाई फाईदा गर्ने bacteria / fungus हरु हुने गर्दा यसको प्रयोग गरि मललाई गुणस्तरीय बनाउन सकिन्छ भने यसको प्रयोग सिधै खेतमा गर्नाले खेतमा धेरै गड्यौलाहरु देखिन थालेको भनेर स्वयं कृषकहरुले नै भन्दै आएका छन् । तपाईहरुले Youtube मा waste decomposer सम्बन्धि धेरै भिडियोहरु र्हेन सक्नु हुन्छ । नेपालमा पनि यसको प्रयोग गरेर धेरै कृषकहरुले अर्गानिक खेती गरिरहेका छन् । चितवनका कृष्ण मुरारी घिमिरे, मोरंगका अग्रज कृषक मुक्ती बरालले यसको प्रयोग गरेर खेती गरिरहनु भएको छ र नतिजा एकदमै प्रभावकरी देखिएको छ । भक्तपुर, गुण्डुमा शोभा न्हेम्हाफूकीले यसको प्रयोग गरि जैविक खेती गरिरहनु भएको छ । यसको प्रभावकारिता यति बढिरहेको छ कि अहिले भारतमा लाखौ कृषकहरुले यसको प्रयोग गरिरहेका छन् । यसको महत्वलाई बुझदै प्रदेश न. १ कृषि बिकास निर्देशनालयले पनि यसको जोरन कृषकहरुलाई सित्तैमा उपलब्ध गराउँदै आएको छ ।
वेस्ट डिकम्पोजर बनाउने तरिका
यदि तपाईले वेस्ट डिकम्पोजरको बट्टा पाउनु भयो भने त्यसलाई निमन तरिकाबाट बनाउँन सकिन्छ ।
२ के.जी. सख्खर वा भेली २०० लिटर पानीमा मिसाउने र घोल बनाउने । उक्त घोलमा १ बोतल वेस्ट डिकम्पोजरमा भएको पदार्थ सबै मिलाउने । यसरी तयार पारिएको घोललाई काठको लठीको सहायताले दैनिक घोल्ने र सफा कपडाले ढाकेर राख्ने । पाँचौँ दिनमा यो मिश्रण तयार हुन्छ । यो तयार भएको मिश्रणलाई जोरनको रुपमा प्रयोग गरि फेरी अर्को मिश्रण तयार गर्न सकिन्छ ।
तपाईले १ लिटर यो मिश्रणबाट २० लिटर पानीमा २०० ग्राम सख्खर हालेर पुर्न घोल बनाउन सक्नु हुन्छ । सो २० लिटरबाट फेरी २०० लिटर बनाउन सकिन्छ । यसरी तपाईलाई आवश्यक मात्रामा जति पनि घोल बनाउन सक्नु हुन्छ ।
वेस्ट डिकम्पजोरका विशेषताहरु
 सरल र विश्वशनिय ।
 ५ दिनमै प्रयोगका निम्ति तयार पार्न सकिने ।
 सबै बालीलाई सिफारिस गर्न सकिने ।
 राम्रो बाली प्रतिक्रिया पाइने ।
 लागत खर्च धेरै कम लाग्ने ।
वेस्ट डिकम्पोजर चाहिएमा सम्पर्क
काठमाडौ उपत्यकाको लागि एग्रीसेन्टर भक्तपुर शोभा न्हेम्हाफूकी ९८४९१७७४७०
भरतपुर चितवन कृष्ण मुरारी घिमिरे ९८४५०६६९८८
झापा प्रमोद वाग्ले ९८४१७०६४२५
प्रदेश न १ कृषि बिकास निर्देशनालय राजेन्द्र उप्रेती ९८५२०७०३१०